Xafiiska adeegyada heer degmo ee dowlada hoose oo laga hirgaliyay Deyniile iyo Dharkiinley | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Xafiiska adeegyada heer degmo ee dowlada hoose oo laga hirgaliyay Deyniile iyo...
Xafiiska adeegyada heer degmo ee dowlada hoose oo laga hirgaliyay Deyniile iyo Dharkiinley
Guddoomiye Ku Xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka Benaadir Mudane Xuseen Maxamed Nuur ayaa maanta xariga ka jaray xafiisyada Adeegga ee degmooyinka Deyniile iyo Dharkiinleey ee Gobolka Benaadir.
Guddoomiye Ku Xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda ee Gobolka Banaadir ayaa sheegay in tallaabadan lagu hirgeliyey xarumahan ay qeyb muhiim ah ka tagay aragtida horumarineed ee Guddoonka Gobolka, isagoona xaqiijiyey in Maamulka Gobolku ay dhawaan ka hirgelin doonaan Xafiiska Adeegga Bulshada dhammaan 17ka Degmo ee Gobolka Benaadir.
“Mudaddi boqolka maalmood ahayd ee Guddoomiye Yarisow uu xilka hayey waxaa noo suurta gashay in aan ka furno todoba degmo oo ka mid ah degmooyinka Gobolka Benaadir xafiisyada adeegga bulshada, taas oo ka tarjumeysa sida ay nooga go’antahay in aan daadajinno adeegyada uu bixiyo Maamulka Gobolku, tani oo meesha ka saareysa culeyska iyo dhibaatada ay kala kulmi jireen shacabku helitaanka adeegyada asaasiga u ah.” Ayuu yiri Guddoomiye Ku Xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda.
Munaasabadda furitaanka xarumahan waxaa goob joog ka ahaa Guddoomiyeyaasha Degmooyinka Dayniile, Dharkiinleey iyo Agaasimaha dakhliga Gobolka Benaadir.
Dadka ku nool degmooyinka Deyniile iyo Dharkiinleey ayaa soo dhaweeyey xafiisyadan looga hirgaliyey deegaannadooda iyagoona tilmaamay in ay ka fududeeynayso caqabadihii ay horey ugala kulmi jireen helitaanka adeegyada ay uga baahanyihiin Maamulka.
Previous articlekulan wadatashi ah logana arinsanaayo hanaanka dhameystirka dastuurka jamuuriyada soomaaliya oo Muqdisho lagu qabtay
Next articleKu-simaha Duqa Muqdisho oo xarigga ka jaray xarunta cusub Degmada Heliwaa